Madaxweynaha Soomaaliya oo ka hadley aqoonsiga Maraykanku siiyey Dowladiisa (Dhegayso) • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Federal Republic of Somalia / Madaxweynaha Soomaaliya oo ka hadley aqoonsiga Maraykanku siiyey Dowladiisa (Dhegayso)
Madaxweynaha Soomaaliya oo ka hadley aqoonsiga Maraykanku siiyey Dowladiisa (Dhegayso)
Madaxweynaha Soomaaliya Xassan Shiikh Maxamuud oo hadda ku sugan magaalada Washington ee dalka Maraykanka ayaa waraysi gaar ah oo uu siiyey laanta afsoomaaliga ee VOA kaga hadley aqoonsiga dalka Maraykanku siinayo maanta Dowladda Soomaaliya muddo 21 sano ah kadib.
Madaxweynaha ayaa sheegay in sababta ka danbeysa aqoonsigan ay tahay xiligii kmeelgaarka aahaa oo laga baxay iyio muddadii aan xafiiska joogney oo aan qabaney shaqooyin waxtar leh.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa ku tilmamey in aqoonisgan uu noqonayo mid Soomaaliya u horseeda sidii dowlad jirta maraykanku ula dhaqmaayo, waxaana dhawaan la filayaa in hay’ado badan oo kale ay aqoonsiga kadib soo celiyaan cilqaqadaakii Soomaaliya la wadaagtey kaas oo kala go ku dhacay.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay in ay booqanayaan Aqalka Cad ee Maraykanka ayna suurta gal tahay in ay madaxweynaha Maraykanka barack Obama la kulmaan laakiin qorshaha aan u nimid ma ahan kulanka Madaxweynaha ee waa in aan waraaqaha diblomaasiyadda is weydaarsano Maraykanka.
Madaxweyne Xassan Shiikh Maxamuud ayaa sidoo kale ka hadley in dhawaan la hawl gelin doono labadii safaaradood ee dalalka Maraykanka iyo Soomaaliya kuwaas oo ku yaaley Washington iyo Muqdisho.
War diblomaasiyeed oo Horseed Media heshey ayaa sheegaya in Maraykanku weli si wadayo nidaamka haya labada waddo Dual Track Policy, taas oo ay gacana kula dhaqmaayeen maamulada kale ee dalka ka jira sida Puntland iyo Somaliland halka gacanta kalena ay kula dhaqmeysey dawladda federaalka Soomaaliya, lama oga nidaamka Dual Track Policy waqtiga uu dhamaan doono.
Dhegayso waraysiga Madaxa laanta afsoomaaliga VOA Cabdiraxmaan yabarow la yeeshay madaxweynaha.